यौन-आवेग दबाउने कि व्यवस्थापन गर्ने ? – दाङ खबर
फागुन २९- सरकारले नेपालमा पोर्न साइटमाथि प्रतिवन्ध लगाएको छ, भलै त्यो पूर्णतय सफल नभएपनि । सरकारले पोर्न साइट अर्थात इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध हुने अश्लिल सामाग्रीलाई त्यहीबेला नियन्त्रण गर्न खोजेको हो, जतिबेला निर्मला पन्त हत्याकाण्ड उत्कर्षमा थियो । त्यसपछि पनि बलात्कार, हत्याको शृंखला चलिरहेको थियो ।
ठिक यही मेसोमो सरकारले सरकारले पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्धको प्रयास गर्‍यो, बलात्कार वा यौन हिंसाले बढाव नपाओस् भनेर ।पोर्न साइट वा अश्लिल सामाग्रीको उपलब्धताले समाजमा यौन विकृति वा यौन हिंसा बढाएको हो ? यो छुटै वहसको विषय हो । किनभने कतिपय यौनमनोविज्ञहरुको तर्क फरक छ ।
उनीहरु भन्ने गर्छन्, ‘यौनकुष्ठाले विकृति पैदा गर्ने हो । यौनलाई जति दबाइन्छ, उत्तिनै मनमा यसप्रतिको विकार जम्मा हुन्छ । त्यसैले नराम्रो हर्कत गर्न उक्साउँछ ।’ यसर्थ यौनमा जति खुल्न सक्यो, यौनजन्य जिज्ञासा मेट्ने माध्याम जति सहज हुन्छ, उत्तिनै यौनकुष्ठा कम हुन्छ । जब यौनकुष्ठा रहँदैन, यौनजन्य अपराध पनि हुँदैन ।
तर, हाम्रो समाजमा यौनबारे खुला बहस हुँदैन । यौनलाई ‘छाडा’ भन्ने गरिन्छ । भित्रभित्रै यौन-आवेग पैदा भएपनि बाहिर भने दबाइन्छ । यौन सम्बन्धी उठ्ने जिज्ञास मेट्न सकिदैन ।
चिन्तक एवं आध्यत्मिक गुरु रजनिशले भनेका छन्, ‘यदि यौनलाई दमन गरियो भने मान्छे कामुकभन्दा कामुक हुन्छन् ।’ उनले एक प्रसंग सुनाएका छन् । एकपटक रजनीश कुनै गाउँमा पुगेका रहेछन् ।
त्यहाँ ठूला विचारक र सन्त-साधु मिलेर अश्लिल पोस्टरमाथि विरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुको धारणा के थियो भने, अश्लिल पोस्टर जथाभावी टाँसेकाले गर्दा मान्छेमा कामवासना फैलिएको छ। रजनीशले भनेका छन्, ‘जबकी अवस्था ठिक फरक छ । त्यही मान्छे पोस्टर हेर्न पुग्छन्, जसमा यौनकुष्ठा छ । जो यौनमा तृप्त छ उसलाई त यसले कुनै असर गर्दैन ।’
यौनलाई हामीले सधै छाडा भन्यौं । बर्जित गर्‍यौं । निषेध गर्‍यौं । यसलाई लाजको विषय बनायौं । रजनीश भन्छन्, ‘हामीले यौनलाई गालीभन्दा माथिल्लो सम्मान कहिल्यै दिएनौ । हामी यौनको कुरा गर्दा समेत भयभित हुन्छौं । हामीले यौनलाई यसरी लुकाएर, दबाएर राख्यौ कि मानौ जीवनमा त्यसको कुनै स्थान छैन ।’
त्यही कारण यौनबारे जिज्ञासा मेट्न सकिने कतिपय वेब सामाग्रीमाथि अहिले प्रतिबन्ध छ । यसरी यौन इच्छा एवं यौन व्यवहारलाई उपेक्षा गर्नु कति सही हो ? यस सम्बन्धमा वहस हुनेनै छ। यद्यपी यौनजन्य सामाग्री जथाभावी रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ, यौन व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु, यसलाई समूचित ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
यौनमा आवश्यक्ताभन्दा बढी तन-मन लगाउनु भनेको यौनको कुलत हुनु हो । कुलतले कहिले पनि सकारात्मक नतिजा दिदैन । त्यसैले यौनप्रति लिप्त भएर त्यसमै घोत्लिने, यौन सामाग्री खोज्ने, मनमा यौनकै विषयमा सोच्ने जस्ता प्रवृत्ति ठिक हुँदैन ।
Prev‘विप्लवलाई प्रतिबन्ध’बारे पार्टीमा छलफल नै भएको छैन, यस्तो चलन ठीक होइन: माधव नेपाल
Nextछुट्टीमा घर गएका सैनिकले श्रीमतीलाई कुटेर यस्तो हालत बनाएपछि….
मनसुनले कृषकमा खुशी तर बाढीको पिरलो
बिरामी बच्चाको मृत्यु भएपछि अस्पताल तोडफोड
फुटवल प्रतियोगितामा यूएनविसी सेमिफाइनलमा प्रबेश